dong - Synonyms of dong | Antonyms of dong | Definition of dong | Example of dong | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for dong
Top 30 analogous words or synonyms for dong
ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ ၁၃။ Pu Dong Hannecy Thang အဖွဲ့ဝင်
လီဒုံဝု ၂၀၁၂ ဧပြီမှ ၂၀၁၃ ဇန်နဝါရီထိ Strong Heart စကားပြောအစီအစဉ်တွင် ဟာသသရုပ်ဆောင် Shin Dong-yup နှင့်အတူ ပင်တိုင်တင်ဆက်သူ လုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၅ ထိ လွှင့်သော အစစ်အမှန်ရှိုး အခန်းဖော်၌ ပါဝင်ခဲ့သည်။
Zapya Wang Xiao Dong, Steve Gu, နှင့် Shanping တို့သည် Zapya ကို ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့ကြသည်။ ၎င်းဆော့ဖ်ဝဲသည် အင်တာနက်လိုင်း ကောင်းမွန်မှု မရှိသော နိုင်ငံများရှိ အသုံးပြုသူများကို အင်တာနက် မပါဘဲ ဖိုင်များကို မျှဝေရန် နှင့် ကူးပြောင်းရန် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အသုံးပြုသူတစ်ယောက်သည် Wi-Fi hotspot ဖန်တီးထားပြီး အခြားအသုံးပြုသူ(စက်များ) က ၎င်းကို ချိတ်ဆက်ကာ အသုံးပြုနိုင်သည်။.
ဟူနန်ပြည်နယ် Hunan's primeval forests were first occupied by the ancestors of the modern Miao, Tujia, Dong and Yao peoples. It entered the written history of China around 350 BC, when under the kings of the Zhou dynasty, it became part of the State of Chu. At this time, and for hundreds of years thereafter, it wasamagnet for migration of Han Chinese from the north, who cleared most of the forests and began farming rice in the valleys and plains. To this day many of the small villages in Hunan are named after the Han families who settled there. Migration from the north was especially prevalent during the Eastern Jin Dynasty and the Southern and Northern Dynasties Periods, when nomadic invaders pushed these peoples south.
ဩဇာသီး အန်တီက ခြင်းကွဲပါလာရင် ဩဇာသီး ကြိုက်တတ်တဲ့ မေမေ့အတွက် ဖယ်ထားပြီး ကျန်တဲ့အလုံးအတွေကို အကြီးအသေး၊ မှည့်ခါနီး၊ အုပ်ထားဖို့ လိုတာ စသည်ဖြင့် သပ်သပ်စီ ဖယ်ထားလိုက် ပါတယ်။အုပ်ပြီးထားတဲ့ ဩဇာသီးတွေ ကိုတော့ အန်တီက မှန်မှန်ကြည့်ပေး နေရတာပါ။ အပင်ကအသီး ရင့်မှခူးလို့ ထင်ပါရဲ့။ သိပ်ကြာကြာ မအုပ်ရပါဘူး။ အသီးတွေက တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး မှည့်လိုက်လာပါ တော့တယ်။မေမေက ဩဇာသီးကြိုက်တာကြောင့် ကလေးတွေကို အစေ့ပေးပြီး စိုက်ခုင်းခဲ့တယ်။ အပင်ပေါက်လာတော့ မေမေ့ အိပ်ခန်းခြေရင်းဘက်မှာ စိုက်ခိုင်းလိုက် ပါတယ်။ လောင်းရိပ်မိလို့ ထင်ပါရဲ့။ မေမေ့အပင်ကလေးက ငါးနှစ်၊ ခြောက်နှစ် ကြာတာတောင် ပုပုလေး နေနေတာပါ။တကယ်တော့ ဩဇာသီးဆိုတာဟာ အစေ့ကစိုက်မှ ရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုင်းကူးစိုက်လဲ ရတာပါ။ တချို့က ကိုင်းရင့်ရင့် ထိုးစိုက်ရင်တောင် ရတယ်လို့ ပြောကြသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မေမေက မေမေကိုယ်တိုင် စားပြီး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မှ အစေ့ကို ပျိုးခုင်းခဲ့တာပါ။ ကျွန်မနဲ့ ယုက မေမေ့ကို-“ ဩဇာသီးကို ဈေးမှာ လက်ရွေးစင် အလုံးဖြစ်ဖြစ်၊ ခြင်းကွဲ စောင့်ဝယ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ကြုက်သလို ဝယ်စားရတာပဲ။ မေမေ့သက်ကြီးပု အပင်လေးက သီးပါ့မလား။ သနားစရာ အပင်လေးပါလား ”လို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ကျွန်မတို့ ပြောကြပြီး မကြာပါဘူး။အဲဒီ သက်ကြီးပု ဩဇာပင်ကလေးက အသီးတစ်လုံး သီးကြောင်း၊ဦးဦးဖျားဖျားမို့ ဆွမ်းတော် တင်လိုက်ကြောင်း မေမေ့စာမှာ ပါလာပါတယ်။ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ ညီအစ်မ နှစ်ယောက်က -“ ဘယ်ဆိုးလို့လဲ။ သက်ကြီးပုက လာသားပဲ” “ ဒီတစ်ခါ ရန်ကုန်ရောက်ရင်တော့ လေတို့၊နေတို့ ရတဲ့နေရာကို ပြောင်းစိုက်ရအောင်” လို့ တိုင်ပင်လိုက် ကြတယ်။အဲဒီနှစ် ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ သက်ကြီးပု ဩဇာပင်ကို နေရာပြောင်း စိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။လေတွေ၊ နေတွေ ရလို့ထင်ပါရဲ့။ အပင်က ပြောင်းစိုက်တဲ့ ပထမနှစ်မှာပဲ အရွက်တွေ ဝေဝေဆာဆာ ဖြစ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြောင်းစိုက်ပြီး ဒုတိယနှစ်ကျမှပဲ အသီးပြန်သီးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ခြံထဲက ရှဥ့်တွေ၊ကျေးတွေ ရန်ကြောက်ရတာကြောင့် ဩဇာသီးကို မှည့်အောင်ထားစားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။နောက်သူ့သဘာဝက အမှည့်မြန်တာကြောင့် အပင်မှာ အက်ကွဲသည်အထိ ထားမရပါဘူး။ တစ်ခါမှာ မေမေက ပင်မှည့်စားချင်တယ် ပြောထားတာကြောင့် မခူးဘဲထားရင်း နောက်တစ်နေ့မှာ အပင်မှာ အညှာသာကျန်ပြီး အသီးက ကွဲပြီးမြေပေါ်ကျနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ့နောက် မေမေက ရင့်တာနဲ့ ခူးခိုင်းတော့ တာပါပဲ။ဒါကြောင့် အသီးတော်တော် ရင့်ပြီး မျက်စိကျဲလာတာနဲ့ ခူးပြီး အုပ်ထားရတာပါ။အန်တီက ဒါကို ကျွမ်းကျင်တာကြောင့် ခြံထဲက အသီးတွေမှန်သမျှ အန်တီပဲ ခူးခိုင်းပြီးစားဖို့ အုပ်ထားပေးစမြဲပါ။ကျွန်မ ဘန်ကောက်ပြန်တဲ့ တစ်ခေါက်မှာ အန်တီပါ လိုက်ခဲ့ပါတယ်။အန်တီ ပါလာတာကြောင့် ကျွန်မရဲ့ထိုင်းသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ဘန်ကောက်နားရှိ တလတ်နမ်ဒုအန်ဝိုင်- Talat Nam Dong Wai(သူတို့က ဈေးကို တလတ် - Talat လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။) ရေပေါ်ဈေးကို လိုက်ပို့ပေး ပါတယ်။ဈေးထဲ လျှောက်သွားရင်းနဲ့ ဧရာမ ဩဇာသီးကြီးတွေကို တွေ့တော့ အန်တီက ကျွန်မကို -“ အဲဒါတွေက ဩဇာသီး ဟုတ်ရဲ့လား။ကြီးလှ ချည့်လား။တစ်လုံးကို ၅ဝကျပ်သားလောက် ရှိမလားတောင် မသိဘူး။တစ်လုံးလောက် ဝယ်သွားရအောင်။အန်တီ အုပ်ပေးထားမယ်” လို့ ပြောပါတော့တယ်။ အန်တီ့အပြောကို ကျွန်မသဘောကျပြီး ပြုံးမိပါတယ်။